Chọ mma ite, Ude karama, Anya Ude ite, Acryli ite - Sich
15ml Top mezuwo acryli Small ịchọ mma Container ...
10ml Bottle Of Ntu Polish jel Ntu Polish Na B ...
10ml Acryli ịchọ mma Containers Efu Ude b ...
10ml acrylic mkpa mmanụ karama nnukwu acrylic ...
10ml New Style Acryli ịchọ mma Bottle maka Seru ...
ShaoXING SICH COSMETICS mbukota Limited
SHAOXING SICH COSMETICS mbukota Limited [Yuyao Langrun Plastic Factory] bụ ọkachamara emeputa nke plastic mbukota ngwaahịa na China, emi odude ke Yuyao obodo. Anyị ụlọ ọrụ kpam kpam na-ekpuchi banyere 1,000 square mita.
Anyị nwere imewe ụlọ na imepụta otu, igwe eji achọ mma agba, akpịrị na-ebi akwụkwọ silk yana igwe na-ekpo ọkụ maka ịdebanye aha na ụdị dị iche iche maka ịmị ọkụ na igwe ọkụ. Ha niile ga-enye aka na ngwaahịa dị elu ma napụta ngwa ngwa
ndị ahịa anyị.
Kedu ihe kpatara nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma ji dị iche ...
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ naanị 14% nke nkwakọ ngwaahịa plastik n'ụwa niile ka a na-emegharị-naanị 5% nke ihe ndị a na-eji ...
Ọtụtụ n'ime nkwakọ ngwaahịa ka emere ...
Ọtụtụ n'ime nkwakọ ngwaahịa ahụ bụ nke iko ma ọ bụ acrylic. Agbanyeghị, n'ime afọ ndị a, anyị achọtala ...
Nyocha nke uru na d ...
A na-atụ anya ka karama plastik zuru ụwa ọnụ too nke ukwuu n'oge amụma. Gr ...
Abịa ọhụrụ airless karama –...
Airless mgbapụta karama chebe enwe mmetụta ọsọ ọsọ ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka eke nlekọta anụ ude, serums, foundat ...
Ngosiputa Ngwa Powder with Sifter, Black karama jel Polish, Anya ude ite, Ihe Ude Ngosiputa Ngwa, Cream Ololo Ngosiputa Ngwa, Creamchọ mma ude ite,